ကုန်ကြမ်း Yohimbine HCL အမှုန့် (65-19-0) ထုတ်လုပ်သူ - Phcoker
SKU: 65-19-0 အမျိုးအစား: လိင်ဟော်မုန်း
ကုန်ကြမ်း Yohimbine HCL အမှုန့် (65-19-0) ကဗီဒီယို
ကုန်ကြမ်း Yohimbine HCL အမှုန့် (65-19-0) S ကpecifications
ထုတ်ကုန်အမည် Yohimbine Hydrochloride အမှုန့်
ဓာတုအမည် Antagonil, Yohimbe, ရော် Yohimbine HCL အမှုန့်, Aphrodine Hydrochloride
မူးယစ်ဆေးအတန်းအစား စက်ရုံ alkaloid
CAS အရေအတွက် 65-19-0
InChIKey PIPZGJSEDRMUAW-VJDCAHTMSA-N ကို
မော်လီကျူး Formula C21H27ClN2O3
မော်လီကျူး Wရှစ် 390.9
အရည်ပျော် Point 288-290 ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်
ဇီဝဗေဒတစ်ဝက်-ဘဝ အဆိုပါမူးယစ်ဆေးလျှင်မြန်စွာစုပ်ယူ (စုပ်ယူတဝက်အချိန် 0.17 +/- 0.11 ဇ) နှင့်လျင်မြန်စွာပလာစမာ (ဖျက်သိမ်းရေးဝက်ဘဝ 0.60 +/- 0.26 ဇ) ကနေဖယ်ရှားပစ်ခဲ့သည်။
Solubility H2အို: 10 မီလီဂရမ် / mL
ကုန်ကြမ်း Yohimbine HCL အမှုန့် (65-19-0) ဖျေါပွခကျြ
Yohimbine အနောက်ပိုင်းအာဖရိကမှတစ်ဦးအမြဲစိမ်းသစ်ပင်ဇာတိဖြစ်ပါတယ်။ ဒါဟာသူ့ရဲ့အခေါက်အတွက် yohimbine လို့ခေါ်တဲ့ဒြပ်ပေါင်းရှိပါတယ်။ အခေါက်ကောက်နုတ်ချက်များထုတ်ယူ, တက်ဘလက်များနှင့်တောင့စေရန်အသုံးပြုသည်။
အာဖရိက၏အစိတ်အပိုင်းများအတွက်, yohimbe အခေါက်ကနေဖန်ဆင်းတော်လက်ဖက်ရည် (လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအလိုဆန္ဒတိုးမြှင့်ဖို့) တစ်ခု aphrodisiac အဖြစ်အသုံးပြုခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။
Yohimbine Hydrochloride တစ်ဦးခွန်အားမရှိခြင်းများအတွက်အစားအသောက်ဖြည့်စွက်, အားကစားစွမ်းဆောင်ရည်, ကိုယ်အလေးချိန်, ရင်ဘတ်နာကျင်မှု, သွေးတိုး, ဆီးချို neuropathy နှင့်ထို့ထက် ပို. အဖြစ်အသုံးပြုပါသည်။
Yohimbine hydrochloride သည်စံသတ်မှတ်ထားသော yohimbine ပုံစံကိုအမေရိကန်ပြည်ထောင်စု၌ကမောက်ကမဖြစ်မှုအတွက်ဆေးညွှန်းအဖြစ်ရနိုင်သည်။ ဒီအပင်၏အခေါက်ကနေလုပ်အစားအသောက်ဖြည့်စွက်ခြင်းထက်ကွဲပြားခြားနားသောထုတ်ကုန်ဖြစ်ပါတယ်။
Yohimbine Hydrochloride အမှုန့် (65-19-0) လှုပ်ရှားမှု၏ယန္တရား
Yohimbine ဟိုက်ဒရိုကလိုရိုက်သည် pre-synaptic alpha 2-adrenergic blocking agent ဖြစ်သည်။ ခွန်အားမရှိသောနေရာတွင်အသုံးပြုရန်အတွက်ယန္တရားအတိအကျကိုအပြည့်အ ၀ ဖော်ထုတ်နိုင်ခြင်းမရှိသေးပါ။ သို့သော် yohimbine သည် alpha 2-adrenergic receptors ၏ပိတ်ဆို့ခြင်းမှတဆင့်စွမ်းဆောင်ရည်အပေါ်အကျိုးရှိသောအကျိုးသက်ရောက်မှုကိုဖြစ်ပေါ်စေနိုင်သည်။ ၎င်းသည် norepinephrine ထုတ်လွှတ်မှုနှင့် ဦး နှောက် noradrenergic nuclei အတွင်းရှိဆဲလ်များအမြန်နှုန်းကိုမြှင့်တင်ခြင်းအားဖြင့်စာနာသောမောင်းနှင်မှုတစ်ခုတိုးလာသည်။ corporeal တစ်ရှူးများ၏အဆင့်တွင် Yohimbine-mediated norepinephrine လွှတ်ပေးရေးလည်းပါဝင်ပတ်သက်နိုင်ပါသည်။ ထို့အပြင်အကျိုးရှိသောသက်ရောက်မှုများမှာအခြား neurotransmitters များဖြစ်သည့် dopamine နှင့် serotonin နှင့် cholinergic receptors တို့ပါ ၀ င်သည်။
ကုန်ကြမ်း Yohimbine HCL အမှုန့်များ၏လျှောက်လွှာ (65-19-0)
▪ Erectile ကမောက်ကမဖြစ်မှု (ED) ။
▪ဌာနမှူးအလုအယက် (orthostatic hypotension) ။
ရွေးချယ်-serotonin reuptake inhibitors (SSRIs) ကဖြစ်ပေါ်စေ▪လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာပြဿနာတွေ။
အကြံပြု Yohimbine Hydrochloride အမှုန့် (65-19-0) သောက်သုံးသော
Yohimbine Hydrochloride အဓိကအား Yohimbine ကောက်နုတ်ချက်များထုတ်ယူသို့မဟုတ် Yohimbine Hydrochloride အမှုန့်နှင့်အတူတောင့၏ form မှာဖွစျပါတယျ။ တခါတလေကျနော်တို့ထုတ်ယူအဖြစ်, အရည် form မှာ Yohimbine Hydrochloride တွေ့နိုင်ပါသည်။ နောက်ထပ် option ကိုဝါး, ဒါမှမဟုတ်တပြင်လုံးကို Yohimbe အမြစ်ကိုစားရန်ဖြစ်ပါသည်, သို့သော်၎င်း၏ရရှိနိုင်မှုနှင့်မရှင်းလင်းရညျအသှေး status ကိုနှင့်အတူပြဿနာများကျနော်တို့ကအကြံပြုကြပါဘူး။
သငျသညျတစ်နေ့လျှင် Yohimbine Hydrochloride ၏5မီလီဂရမ်၏ထိုးနှင့်အတူစတင်သင့်ပါတယ်။ သငျသညျ၎င်းငျး၏အသုံးပြုမှုကိုပိုမိုအကြိုးခံစားခှငျ့ရရှိချင်တယ်ဆိုရင်သင်, တစ်ရက်တောင်မှ 15-20mg ကတိုးမြှင့်နိုင်ပါသည်, သို့သော်အမြဲအဖြစ်ကျွန်တော်သတိထားအကြံပြု! က overdo မနေပါနဲ့!
ကုန်ကြမ်း Yohimbine HCL အမှုန့်များ၏ဘေးထွက်ဆိုးကျိုး (65-19-0)
yohimbine Hydrochloride ၏ဘုံဘေးထွက်ဆိုးကျိုးနေသောခေါင်းစဉ်:
အများအပြားကလေ့လာမှုများ yohimbine ကြွက်များနှင့်မျောက်များအတွက် food- နှင့်မူးယစ်ဆေးဝါး-ရှာကြံအပြုအမူကိုအားပေးအားမြှောက်ကြောင်းပြသခဲ့ကြသည်။
yohimbine ခဲမှုကိုလျော့နည်းစေသောကြောင့်, က hemophiliacs နှင့်မကြာသေးမီကခွဲစိတ်ကုသမှုခံယူခဲ့ကြတဲ့သူတွေကိုအားဖြင့်ရှောင်ကြဉ်ရပါမည်။ ထိုကဲ့သို့သော Aspirin, warfarin နှင့် heparin အဖြစ်အသွေးသည်ပိုမိုပါးလွှာ yohimbine Hydrochloride နှင့်အတူခေါ်ဆောင်သွားမရသင့်ပါတယ်။